Wellisuun Dandeetti Uumamaan Argatan VOASites by Language
Sanbata Diqqaa, Guraandhalaa 13, 2016 Local time: 15:49
Wellisuun Dandeetti Uumamaan Argatan Print
Wellisaa Kadir Se'idxWellisaa Kadir Se'id
WASHINGTON DC— Ijoollummaa kootii kaasee wallee aadaa wellisaan guddadhe kan jedhu Kadiir Se’iid gaaf tokko carraa Raadiyoo irratti walleen koo dhiyaachu hinuma dhufa jedhee yeroo ijoollummaa isaa abdataa ka ture ta’uu dubbata.
Wellisaa Kadiir waggootii dheeraaf baqatummaan Jabuutii keessatti rakkataa eega ture booda dhiyeenya kana Yunaaytiid Steetes kutaa Minisootaa keessa qubate.
Jireenyii baqattummaa fedhii wellisuuf qabu yeroo dheeraaf danqee turuus ammaan booda garuu hawwii koo fixaan baasuuf hamilee jabaa akka isa bara ijoollummaa kootiitu natti dhaga’ama jedha wellisaa Kadiir Se’iid.
Dhaloonni har’aa kanneen biyya ambaa keessa jiran aadaa ofii guddisuu irratti of dagachuu hin qaban kan jedhu wellisaa kaiir eenyummaa ofiin boonuun akka irra jiru huubachisee jira.
Gaaffii deebii kutaa lamaan gaggeeffame armaa gadiitti caqasaa
Gaaffii deebii kutaa lamaan gaggeeffame armaa gadiitti caqasaai
Gaaffii fi deebii kutaa 2ffaai